ဘုရားသခင့်လက်နက်အပြည့်အစုံ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > တရားဒေသနာ > ဘုရားသခင်၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာအားလုံး
ယနေ့ခရစ်စမတ်တွင်God'sဖက်မြို့သားများထံရေးသောစာ၌“ ဘုရားသခင်၏လက်နက်တော်” ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ပေါလုသည်ဤစာကိုရောမမြို့၌ထောင်ကျခဲ့သည်။ သူကသူ့အားနည်းချက်ကိုသိပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားခဲ့သည်။
“နောက်ဆုံးတွင်၊ သခင်ဘုရား၌လည်းကောင်း၊ တန်ခိုးတော်အားဖြင့်လည်းကောင်း ခိုင်ခံ့ကြလော့။ မာရ်နတ်၏ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲခြင်းများကို ခံရပ်နိုင်စေရန် ဘုရားသခင်၏လက်နက်စုံကို ဝတ်ဆင်ပါ” (ဧဖက်၊ 6,10-11) ။
ဘုရားသခင်၏လက်နက်တော်သည်ယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အရှင်ယေရှု။ သူဟာမာရ်နတ်ကိုသူ့ဘာသာမကျော်နိုင်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်။ သခင်ယေရှုသည်သူ့အတွက်မာရ်နတ်ကိုအနိုင်ယူပြီးဖြစ်သောကြောင့်သူလည်းဤအရာကိုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
“ဒါပေမယ့် ဒီကလေးတွေအားလုံးဟာ အသွေးအသားရှိတဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်လို့၊ သူလည်း အသွေးအသားရှိတဲ့ လူဖြစ်လာတယ်။ ထို့ကြောင့် သေခြင်းအားဖြင့် တန်ခိုးတော်အားဖြင့် မာရ်နတ်ဟူသည် သေခြင်းတရားကို ကျင့်သုံးသောသူကို နှိမ့်ချနိုင်သည်” (ဟေဗြဲ 2,14 NGÜ)။
ယေရှုသည်အပြစ် မှလွဲ၍ ငါတို့ကဲ့သို့လူသားဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုခရစ်၏လူ့ဇာတိခံခြင်းကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပကြသည်။ သူ၏အသက်တာတွင်သူသည်အဆိုးရွားဆုံးသောရုန်းကန်မှုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ယေရှုအသေခံရန်အသင့်ရှိခဲ့သည်။ အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သူကအောင်မြင်သူဖြစ်ပုံရသည်။ သခင်ယေရှုကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသည်ကိုမာရ်နတ်မြင်သောအခါ“ မည်သည့်အောင်မြင်မှုဖြစ်သည်” ဟုစဉ်းစားမိသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီးနောက်သူသည်မိမိ၏တန်ခိုးတော်အားလုံးကိုယူဆောင်သွားသည်ကိုသူသိသောအခါသူ့အတွက်လုံးဝတုန်လှုပ်သွားသည်။
ဘုရားသခင့်ချပ်ဝတ်တန်ဆာ၏ပထမပိုင်းတွင်ပါဝင်သည် အမှန်တရား၊ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ယုံကြည်ခြင်း, သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤကာကွယ်မှုကိုသခင်ယေရှု၌အပ်နှင်းပြီးမာရ်နတ်၏စဉ်းလဲသောပရိယာယ်များကိုခံရပ်နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုတွန်းလှန်ပြီးယေရှုပေးသောအသက်ကိုကာကွယ်ကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုသည်။
“ယခုတည်၍ သင်၏ခါးကို သစ္စာနှင့်စည်းလော့” (ဧဖက် 6,14).
ကျွန်ုပ်တို့၏ခါးပတ်သည်အမှန်တရားနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အမှန်တရားကဘယ်သူလဲ၊ သခင်ယေရှုက“ငါကအမှန်တရားပဲ။» (ယော ၁4,6ပေါလုက သူ့ကိုယ်သူ ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။
"ထို့ကြောင့် ငါအသက်မရှင်တော့ဘဲ၊ ခရစ်တော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူ၏။" (ဂလာတိ 2,20 HFA)။
အမှန်တရားသည်သင်၏အတွင်း၌တည်ရှိပြီးသင်သည်သခင်ယေရှု၌မည်သူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယေရှုသည်အမှန်တရားကိုသင့်အားဖွင့်ပြခဲ့ပြီးသင်၏အားနည်းချက်ကိုသင့်အားမြင်စေနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှားများကိုသတိထားမိ။ ခရစ်တော်မရှိရင်သင်ဟာအပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်အားသူတို့ပြသရန်ကောင်းသောအရာများမရှိပါ။ သင်၏အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုသူ့အားသိ၏။ မင်းအပြစ်သားဖြစ်ရင်မင်းအတွက်သေတယ် ဒါကအမှန်တရားရဲ့တစ်ဖက်။ အခြားတစ်ဖက်မှာ - ယေရှုသည်သင့်အားကြမ်းတမ်းသောအနားများဖြင့်ချစ်သည်။
“ဖြောင့်မတ်ခြင်းလက်နက်စုံကို ဝတ်ဆင်” (ဧဖက် 6,14).
“သူ (ယေရှု) နဲ့ ပေါင်းသင်းလိုတဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံး ဆန္ဒပါ။ ထို့ကြောင့် တရားတော်ကိုအခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုများဖြင့် ဆည်းပူးရသော ကုသိုလ်တရားများအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ဘာမှ မသိချင်တော့ပါ။ ယင်းအစား၊ ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့် ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သော ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ပါသည်” (ဖိလိပ္ပိ၊ 3,9 (GNÜ) ။
ခရစ်တော်သည်သင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်အတူနေထိုင်သည်။ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုသင်ရရှိခဲ့သည်။ မင်းရဲ့တရားမျှတမှုကမင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ ခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့။ သူသည်အပြစ်၊ လောကနှင့်သေခြင်းကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ သင်တစ် ဦး တည်းလုပ်ဆောင်နိူင်သည်ကိုအစကတည်းကဘုရားသခင်သိသည်။ ယေရှုသည်သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ သူသည်အသွေးဖြင့်အကြွေးအားလုံးကိုဆပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်ရှေ့တွင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ သင်သည်ခရစ်တော်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏တရားမျှတမှုကသင့်အားသန့်ရှင်း။ ခွန်အားဖြစ်စေသည်။
“ငြိမ်သက်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားအတွက် မတ်တပ်ရပ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီ” (ဧဖက် 6,14).
ကမ္ဘာမြေတစ်ခုလုံးအတွက်ဘုရားသခင့်ရူပါရုံသည်ကိုယ်တော်၏ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂,၀၀၀ ခန့်ကယေရှုဖွားမြင်ခြင်း၌ကောင်းကင်တမန်အမြောက်အမြားကဤအမိန့်ကိုကြေငြာခဲ့သည် -“ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ဘုန်းအသရေ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းမင်းသားယေရှုသည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသူသွားလေရာတိုင်းဆောင်တတ်၏။
“သင်တို့သည် ငါ့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းငှာ ဤစကားကို ငါပြောပြီ။ ဤလောက၌ သင်သည် ကြောက်တတ်၏။ ရွှင်လန်းသောစိတ်ရှိလော့၊ ငါသည် ဤလောကကို အောင်ပြီ” (ယော၊ ၁6,33).
ယေရှုသည်သင့်အားငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့်နေထိုင်သည်။ ခရစ်တော်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ခရစ်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိသည်။ သူတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာ နေ၍၊
“အခြားအရာများထက်၊ ယုံကြည်ခြင်း၏အကွယ်အကာကို ကိုင်ထားပါ” (ဧဖက် 6,16).
"ခရစ်တော်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့စိတ်နှလုံး၌ ကျိန်းဝပ်၍၊ သင်တို့၌ အမြစ်စွဲ၍ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ တည်စေခြင်းငှာ၊ အတွင်းလူ၌ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခိုင်ခံ့စေခြင်းငှာ၊ ဘုန်းစည်းစိမ်နှင့်အညီ ခွန်အားကို ပေးသနားတော်မူမည်အကြောင်း၊" (ဧဖက်၊ 3,16-17) ။
ခရစ်တော်သည်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ရှင်သန်သည်။ ယေရှုနှင့်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်သင်၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မကောင်းသောမီးတောက်မီးများအားလုံးကိုငြိမ်းစေ၏။
“ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက်ကို မကြည့်ချင်သော်လည်း ယေရှုကိုသာ ကြည့်ချင်ကြသည်။ ယုံကြည်ခြင်းကို ပေးတော်မူပြီး မရောက်မချင်း စောင့်ရှောက်တော်မူမည်။ ကြီးစွာသောရွှင်လန်းမှုကို စောင့်ကြိုနေသောကြောင့်၊ ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် မထီမဲ့မြင်ပြုသောသေခြင်းကို ခံရပ်ခဲ့သည်” (ဟေဗြဲ ၁း၁၊2,2 HFA)။
“ဒါကြောင့် မင်းအတွက် ဘုရားသခင် အသင့်ရှိထားတဲ့ လက်နက်အားလုံးကို ယူလိုက်ပါ။ ဆိုးသွမ်းသော အင်အားစုများ တိုက်ခိုက်သည့်နေ့ ရောက်လာသောအခါ 'မင်း လက်နက်ကိုင်ပြီး' သူတို့ကို ဆန့်ကျင်နိုင်သည်။ သင်သည် အောင်အောင်မြင်မြင် တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်၊ အဆုံးတွင် သင်သည် အောင်ပွဲခံလိမ့်မည်” (ဧဖက် 6,13 NGÜ)။
ဦး ထုပ်နှင့်ဓားသည်ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ဆုပ်ကိုင်ထားသင့်သည့်နောက်ဆုံးကိရိယာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ရောမစစ်သားတစ် ဦး သည်မသက်မသာသံခမောက်ကိုမကြာမီအန္တရာယ်ကျရောက်စေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတော့သူဟာဓားကိုကိုင်ပြီးသူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောထိုးစစ်လက်နက်။
ပေါလု၏ခက်ခဲသောအနေအထားတွင်ရောက်နေကြစို့။ တမန်တော်များကသူနှင့်ဂျေရုဆလင်မြို့ရှိအဖြစ်အပျက်များ၊ ရောမတို့၏ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်ကဲသရိမြို့တွင်ကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းများအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ယုဒလူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုအဘယ်သို့ပြစ်မှား။ ၊ ပေါလုသည်theကရာဇ်မင်းထံအယူခံဝင်ပြီးရောမသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။ သူသည်ချုပ်နှောင်ထားခံရပြီးforကရာဇ်တရားရုံးရှေ့တွင်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
“ကယ်တင်ခြင်း၏ခမောက်ကိုယူ” (ဧဖက် 6,17).
သံခမောက်သည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှင်ပေါလုရေးသားသည် -
“သို့သော်လည်း၊ ယနေ့ခေတ်သားတို့ဖြစ်ကြသော ငါတို့မူကား၊ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို ၀တ်ဆင်ကာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မျှော်လင့်ချက်ခမောက်လုံးကို ၀တ်ဆင်လိုကြသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အမျက်ထွက်စေတော်မမူဘဲ၊ ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသော ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းငှာ၊ ငါတို့နိုးသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်သည်ဖြစ်စေ၊ 1. သက်သာလောနိတ်မြို့ 5,8-10 ။
“ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့် ဝိညာဉ်တော်၏ဓား” (ဧဖက် 6,17).
ရှင်ပေါလုသည်ဘုရားသခင်၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုဤသို့ရှင်းပြသည် -“ ၀ ိညာဉ်ဓားသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်” ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်နှင့်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်သွယ်ဝိုက်။ ဆက်စပ်နေသည်။ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်သည်ဝိညာဉ်ရေးမှုတ်သွင်းခံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အကူအညီဖြင့်သာနားလည်ပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကမှန်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်။
၎င်းသည်ယုံကြည်သူအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးသောဓားဖြစ်သည်။ ၀ ိညာဉ်တော်၏ဓားကိုဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ "word" ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "logos" မှမဟုတ်ဘဲ "rhema" လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်။ ဤစကားလုံးသည်“ ဘုရားသခင်ထံမှပြောခြင်း”၊ ငါက“ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်း။ မြွက်ဆိုသောစကားလုံး” ကိုဤသို့ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားစကားလုံးတစ်လုံးကိုဖော်ပြပေးသည်။ ဒါဟာအသံထွက်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ညီညွတ်တဲ့ဘာသာပြန်ကျမ်းမှာဖတ်တယ်
«ဝိညာဉ်၏ဓား၊ ဒါကဘုရားသခင့်စကားပဲဆုတောင်းပဌနာပြုသောအားဖြင့် အခါတိုင်း၌ စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်း” (ဂလာတိ၊ 6,17-18) ။
သမ္မာကျမ်းစာသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုလေ့လာခြင်းသည်ခရစ်ယာန်အသက်တာ၏အရေးကြီးသောကဏ္ is တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်မည်သူ၊ အတိတ်ကသူလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာနှင့်အနာဂတ်တွင်လုပ်ဆောင်ပေးမည့်အရာများမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူကြသည်။ စာအုပ်တိုင်းတွင်စာရေးသူရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုရေးသားသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်သားတော်သည်စာတန်၏စုံစမ်းနှောင့်ယှက်မှုကိုခံရန်နှင့်လူသားများကိုရွေးနုတ်ရန်မြေကြီးပေါ်သို့ကြွလာခဲ့သည်။ ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ။ ၊ သူသည်ရက်ပေါင်း ၄၀ အစာရှောင်ခဲ့ပြီးအစာခေါင်းပါးခဲ့သည်။
“ထိုအခါ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်သောသူသည် အထံတော်သို့လာ၍၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်လျှင်၊ ကျမ်းစာလာသည်ကား၊ (တရား 8,3) "လူသည် မုန့်နှင့်အသက်ရှင်သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှထွက်သော စကားတိုင်း၌ အသက်ရှင်သည်" (မဿဲ၊ 4,3-4) ။
ဤတွင်ဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်တော်မှသခင်ယေရှု၏စကားတော်ကိုစာတန်အားအဖြေပေးပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုမည်သူကအကောင်းဆုံးကိုးကားနိုင်ကြောင်းတော့မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ အားလုံးသို့မဟုတ်လုံးဝမဟုတ်ဘူး မာရ်နတ်သည်ယေရှု၏အခွင့်အာဏာကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည်မာရ်နတ်မတိုင်မီသူ၏သားဖြစ်ခြင်းကိုအပြစ်မတင်သင့်ပါ။ ယေရှုနှစ်ခြင်းခံပြီးနောက်ဘုရားသခင်ထံမှသက်သေခံချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် -“ ဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေတည်း။ ”
ဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းသောဆုတောင်းချက်ကိုပြောရန်ဖက်မြို့သားများအားပေါလုတိုက်တွန်းခဲ့သည်
“ဝိညာဉ်တော်၌ အသနားခံခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြု၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အတွက် ဆုတောင်းခြင်း၌ ဇွဲလုံ့လဖြင့် အမြဲစောင့်ကြည့်” (ဧဖက်၊ 6,18 NGÜ)။
“ ဆုတောင်းခြင်း” နှင့်“ ဆုတောင်းခြင်း” ဟူသောဝေါဟာရအရ“ ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောခြင်း” ကိုကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ ငါသည်ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောခြင်း၊ အတွေးများအားဖြင့်အချိန်တိုင်းစကားပြောနေသည်။ ၀ ိညာဉ်တော်၌ဆုတောင်းခြင်းဆိုသည်မှာ“ ဘုရားသခင်ကိုငါကြည့်ပြီးသူထံမှပြောသင့်ရာကိုလက်ခံရရှိပြီးအခြေအနေတစ်ခုသို့သူ၏အလိုတော်ကိုပြောဆိုသည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းသောဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသူပြီးသားအလုပ်လုပ်သည်ရှိရာဘုရားသခင်၏အမှု၌ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းအတွက်သာမကအထူးသဖြင့်သူ့အားဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောဆိုရန်စာဖတ်သူများကိုပေါလုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ရှင်ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကိုဖွင့်သောအခါတွင် ဧဝံဂေလိတရား၏နက်နဲသောအရာကို ရဲရင့်စွာကြေငြာရန် နှုတ်ကပတ်တော်အား ကျွန်ုပ်အား ပေးတော်မူမည်အကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်သည် သံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ထားသော ဧဝံဂေလိတရား၏တမန်ကို လိုအပ်သလို ရဲရင့်စွာပြောဆိုနိုင်စေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်အား ဆုတောင်းပါလော့။” (ဧဖက်၊ 6,19-20) ။
ဤတွင်ပေါလုသည်ယုံကြည်သူအားလုံး၏အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းအတွက်အကူအညီတောင်းသည်။ ဤစာသားတွင်သူသည်“ ပွင့်လင်းရိုးသားမှု” ကိုသုံးပြီးandကရာဇ်နှင့်ညှိနှိုင်းရန်အားပေးသည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူရာကိုပြောဆိုရန်မှန်ကန်သောစကားလုံးများ၊ မှန်ကန်သောလက်နက်များသူလိုအပ်ခဲ့သည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည်ဤလက်နက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်ဘုရားသခင်ကြားဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။ အစစ်အမှန်နက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေး၏အခြေခံ။ ပေါလု၏ကိုယ်ပိုင်ဆုတောင်းချက် -
“အဘ၊ ကိုယ်တော်၏ ဘုန်းစည်းစိမ်တော်ထဲက ကိုယ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော် ပေးစွမ်းနိုင်သော ခွန်အားကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်၊ ယေရှုသည် သူတို့၏စိတ်နှလုံး၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူပါစေသော။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ခိုင်မြဲစွာ အမြစ်တွယ်ပြီး သူတို့၏အသက်တာကို တည်ဆောက်ကြပါစို့၊ သို့မှသာ ခရစ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် မည်မျှကြီးမား၍ ကျယ်ဝန်းသည်၊ မည်မျှ ကြီးမားသည်၊ မည်မျှ နက်နဲသည်ကိုလည်း သိရှိနားလည်နိုင်စေရန်၊ စိတ်ကူးအားလုံးထက် ကျော်လွန်သည်။ အဘ၊ ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်စေတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုနိုင်သည့် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်ထက် အကန့်အသတ်မရှိ ပို၍လုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၌ လုပ်ဆောင်သော တန်ခိုးတော်သည် အလွန်ကြီးမြတ်သည် - ဤဘုရားသခင်သည် အသင်းတော်အတွင်းနှင့် ယေရှုခရစ်၌ ထာဝရဘုန်းအသရေဖြစ်ပါစေသော။ အာမင်။" (ဧဖက် 3,17-21 သမ္မာကျမ်းစာဘာသာပြန် » ကြိုဆိုပါတယ်အိမ် »)
ဖက်မြို့သားများထံစာရေးသောအခါပေါလုသည်ရောမစစ်သားတစ် ဦး ၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုအမှန်ပင်စိတ်စွဲမှတ်ထားခဲ့သည်။ သူသည်ကျမ်းတတ်တစ် ဦး အနေနှင့်မေရှိယပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်များကိုအလွန်ရင်းနှီးခဲ့သည်။ မေရှိယကိုယ်တိုင်ဤသံချပ်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
“ထိုအရပ်၌ အဘယ်သူမျှမရှိသည်ကို သိမြင်တော်မူ၍ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဆုတောင်းခြင်း၌ မည်သူမျှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မရှိသည်ကို အံ့ဩခြင်းရှိတော်မူ၏။ ဒါ​ကြောင့် လက်​ရုံး​တော်​က ထောက်​ခံ​ပြီး ဖြောင့်​မတ်​ခြင်း​ကို ထောက်​ခံ​တယ်။ တရားမျှတမှုကို သံချပ်ကာအဖြစ် ဝတ်ဆင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သံခမောက်ကို ဆောင်းပါ။ ဒဏ်ခတ်ခြင်းအဝတ်ကို ခြုံ၍ ဇွဲလုံ့လဝတ်လုံနှင့် ဖုံးအုပ်လေ၏။ သို့ရာတွင်၊ ဇိအုန်နှင့် ယာကုပ်တို့၏ အပြစ်မှ လွှဲရှောင်သူတို့အတွက်၊ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကြွလာတော်မူသည်။ ထို​အ​ခါ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သည် နှုတ်​က​ပတ်​တော်​ကို​ပေး​တော်​မူ​၏” (ဟေ​ရှာ​ယ ၅9,16-17 နှင့် 20 HFA)။
“သူသည် သူ့ဥစ္စာနှင့်သူ ဝင်လာပြီး သူ့သဘောအတိုင်း လက်မခံ။ နာမတော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့မူကား၊ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်စေခြင်းငှါ တန်ခိုးကို ပေးတော်မူ၏။” (ယောဟန်၊ 1,11-12) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာရုန်းကန်မှုတွင်အရေးအကြီးဆုံးလက်နက်မှာဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်တော်၊ မေရှိယ၊ ဘိသိက်ခံ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်၊ ကယ်တင်ရှင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖြစ်သည်။
မင်းသူ့ကိုသိပြီးသားလား မင်းရဲ့ဘဝမှာသူ့ကိုပိုပြီးသြဇာလွှမ်းမိုးချင်ပါသလား။ ဤခေါင်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါသလား။ WKG ဆွစ်ဇာလန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းသည်သင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် ၀ မ်းသာသည်။
သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အလယ်၌ နေ၍ တန်ခိုးတော်၊ ဘုန်းအသရေနှင့်ပြန်လည်ကြွလာသောအခါအသင့်ဖြစ်ရန်၊